၂၀၁၈ ဇူလိုင်လမှာ ပေါက်နေတဲ့ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ သီချင်း (၁၀) ပုဒ်
24 Jul 2018 . 3:23 PM
ဇူလိုင်လရဲ့ မိုးရေစက်တွေကြား လျှောက်သွား လျှောက်စားနေမလား၊ အိမ်မှာထွေးပြီး ကွေးနေမလား။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဂီတကတော့ လျှောက်သွားရင်း ကားပေါ်မှာလည်း နားထောင်လို့ရ၊ အိမ်မှာလည်း ဖွင့်ထားလို့ ရတဲ့ အဖော်စစ်ပါပဲ။ သီချင်းချစ်သူတွေအတွက် အခု ဇူလိုင်လမှာ YouTube မှာ Hit ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို အခုပဲ ဒေါင်းလိုက်ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်အဆိုတော်မလေး Bebe Rexha ရဲ့ ‘I’m A Mess’ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ စရအောင်ဗျာ။ ‘I’mamess, I’maloser..I’mahater, I’mauser, he don’t love me , he don’t love me” ဆိုတဲ့ အရှုံးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ၊ သူချစ်တဲ့ ကောင်လေးက သူ့ကို မချစ်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ “Everything’s gonna be alright Everything’s gonna be okay” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်အားတင်းနေတဲ့ ဒွိဟခံစားချက်လေးကို မြင်ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ ဒီလို ဝိရောဓိခံစားချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကြိုက်ကြတဲ့အတွက် Hit Song ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
အခုတလော အရမ်း Hot နေတဲ့ Troye Sivan နဲ့ Ariana Grande တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်ပြီး Bloom Album ထဲကပါ။ Pop နဲ့ R&B နွယ်တဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားလေး ဖြစ်ပြီး “We can just dance to this” ဆိုပြီး လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဆိုထားတဲ့အတွက် စာတွေလုပ်နေ၊ အလုပ်တွေများနေတုန်း ဖွင့်ထားရင်း လိုက်မျောလို့ ရပါတယ်။
Halsey နဲ့ Khalid တို့ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ပူးတွဲဖန်တီးတာကို မြင်ရတာ အတော်မိုက်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကလည်း သူတို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ပုံနဲ့ သူတို့ အချစ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပုံတွေ၊ ငယ်ဘဝအိပ်မက်တွေကို ဖွဲ့ထားတာ ချစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ “He used to meet me on the Eastside” ဆိုပြီး ငယ်ဘဝကို ပြန်လွမ်းမောကြရအောင်။
အမျောလေးတွေ သွားပြီးတော့ မြူးမြူးကြွကြွလေးတွေဆီ ပြန်လှည့်ရအောင်။ “Almost Love” ဟာ Electropop အမျိုးအစားလေး ဖြစ်ပြီး ဒီသီချင်းလေးစဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ Sabrina Carpenter တစ်ယောက် သူ့ဖုန်းက Note မှာ ဒီ သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးကို တွေ့လိုက်တဲ့ခဏမှာ ရေးသားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Bebe Rexha ရဲ့ နောက်ထပ် Pop သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ “If I’m not all you need Then Just set me free” ဆိုပြီး တကယ်လို့ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုကြီး မနေပါနဲ့။ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဆိုပြီး ညည်းဆိုထားတာပါ။ စာသားလေးတွေဟာ Relationship တစ်ခုမှာ ကြုံရတတ်တာတွေမို့ အကြိုက်တွေ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကတော့ Nicki Minaj ရဲ့ ‘Queen’ Album ထဲက သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Nicki Minaj နဲ့ Ariana Grande တို့ရဲ့ ၄ပုဒ်မြောက်တွဲဆိုတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပြီး အထူးအထွေပြောစရာမရှိဘဲ Nicki Minaj ဆိုနေကျ သီချင်းပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The Vamps အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ လှည့်စားပြုစားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို သီချင်းလှလှလေး ဖွဲ့ပြထားပါတယ်။
Rapper လေး Lil Mosey ရဲ့ Noticed ကတော့ ကြားနေကြ Rap သီချင်းတွေထဲကမှ အသစ်တစ်ပုဒ်ပါ။
‘God IsaWoman’ သီချင်းကတော့ Ariana Grande ရဲ့ Album ‘Sweetener’ ထဲမှာ ပါတဲ့ သီချင်းပါ။ သီချင်းစာသားတွေကတော့ လိုက်နားထောင်ပြီး မျောမှ ရပါလိမ့်မယ်။
Pops – THEY.
THEY. ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နှစ်ယောက်တွဲ R&B အဖွဲ့လေးကတော့ Pops ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ သူတို့ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ သူတို့ အဖေတွေရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ပျိုးထောင်မှုကို ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၁၈ ဇူလိုငျလမှာ ပေါကျနတေဲ့ အကောငျးဆုံး နိုငျငံတကာ သီခငျြး (၁၀) ပုဒျ
ဇူလိုငျလရဲ့ မိုးရစေကျတှကွေား လြှောကျသှား လြှောကျစားနမေလား၊ အိမျမှာထှေးပွီး ကှေးနမေလား။ ဘာပဲလုပျလုပျ ဂီတကတော့ လြှောကျသှားရငျး ကားပျေါမှာလညျး နားထောငျလို့ရ၊ အိမျမှာလညျး ဖှငျ့ထားလို့ ရတဲ့ အဖျောစဈပါပဲ။ သီခငျြးခဈြသူတှအေတှကျ အခု ဇူလိုငျလမှာ YouTube မှာ Hit ဖွဈနတေဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို အခုပဲ ဒေါငျးလိုကျရအောငျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျအဆိုတျောမလေး Bebe Rexha ရဲ့ ‘I’m A Mess’ ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ စရအောငျဗြာ။ ‘I’mamess, I’maloser..I’mahater, I’mauser, he don’t love me , he don’t love me” ဆိုတဲ့ အရှုံးသမားတဈယောကျရဲ့ ဘဝ၊ သူခဈြတဲ့ ကောငျလေးက သူ့ကို မခဈြဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြတှနေဲ့ တပွိုငျတညျးမှာပဲ “Everything’s gonna be alright Everything’s gonna be okay” ဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပွနျအားတငျးနတေဲ့ ဒှိဟခံစားခကျြလေးကို မွငျရပါတယျ။ ဒီသီခငျြးဟာ ဒီလို ဝိရောဓိခံစားခကျြတှရှေိတဲ့ မိနျးကလေးတှကွေိုကျကွတဲ့အတှကျ Hit Song ဖွဈလာခဲ့တာပါ။
အခုတလော အရမျး Hot နတေဲ့ Troye Sivan နဲ့ Ariana Grande တို့ ပူးပေါငျးတငျဆကျထားတဲ့ သီခငျြးလေး ဖွဈပွီး Bloom Album ထဲကပါ။ Pop နဲ့ R&B နှယျတဲ့ သီခငျြးအမြိုးအစားလေး ဖွဈပွီး “We can just dance to this” ဆိုပွီး လူငယျဆနျဆနျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဆိုထားတဲ့အတှကျ စာတှလေုပျနေ၊ အလုပျတှမြေားနတေုနျး ဖှငျ့ထားရငျး လိုကျမြောလို့ ရပါတယျ။
Halsey နဲ့ Khalid တို့ကို သီခငျြးတဈပုဒျပူးတှဲဖနျတီးတာကို မွငျရတာ အတျောမိုကျပါတယျ။ သီခငျြးလေးကလညျး သူတို့ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ပုံနဲ့ သူတို့ အခဈြကို စတငျတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ပုံတှေ၊ ငယျဘဝအိပျမကျတှကေို ဖှဲ့ထားတာ ခဈြဖို့ ကောငျးပါတယျ။ “He used to meet me on the Eastside” ဆိုပွီး ငယျဘဝကို ပွနျလှမျးမောကွရအောငျ။
အမြောလေးတှေ သှားပွီးတော့ မွူးမွူးကွှကွှလေးတှဆေီ ပွနျလှညျ့ရအောငျ။ “Almost Love” ဟာ Electropop အမြိုးအစားလေး ဖွဈပွီး ဒီသီခငျြးလေးစဖွဈပျေါလာတာကတော့ Sabrina Carpenter တဈယောကျ သူ့ဖုနျးက Note မှာ ဒီ သီခငျြးခေါငျးစဉျလေးကို တှလေို့ကျတဲ့ခဏမှာ ရေးသားဖွဈခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Bebe Rexha ရဲ့ နောကျထပျ Pop သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျပါပဲ။ “If I’m not all you need Then Just set me free” ဆိုပွီး တကယျလို့ ကိုယျ့ကို မလိုအပျတော့ဘူးဆိုရငျ ဒီလိုကွီး မနပေါနဲ့။ လှတျပေးလိုကျပါတော့ဆိုပွီး ညညျးဆိုထားတာပါ။ စာသားလေးတှဟော Relationship တဈခုမှာ ကွုံရတတျတာတှမေို့ အကွိုကျတှကွေ့မယျထငျပါတယျ။
ဒီသီခငျြးကတော့ Nicki Minaj ရဲ့ ‘Queen’ Album ထဲက သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ Nicki Minaj နဲ့ Ariana Grande တို့ရဲ့ ၄ပုဒျမွောကျတှဲဆိုတဲ့ သီခငျြးဖွဈပွီး အထူးအထှပွေောစရာမရှိဘဲ Nicki Minaj ဆိုနကြေ သီခငျြးပုံပဲ ဖွဈပါတယျ။
The Vamps အဖှဲ့ရဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျပါ။ လှညျ့စားပွုစားတတျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအကွောငျးကို သီခငျြးလှလှလေး ဖှဲ့ပွထားပါတယျ။
Rapper လေး Lil Mosey ရဲ့ Noticed ကတော့ ကွားနကွေ Rap သီခငျြးတှထေဲကမှ အသဈတဈပုဒျပါ။
‘God IsaWoman’ သီခငျြးကတော့ Ariana Grande ရဲ့ Album ‘Sweetener’ ထဲမှာ ပါတဲ့ သီခငျြးပါ။ သီခငျြးစာသားတှကေတော့ လိုကျနားထောငျပွီး မြောမှ ရပါလိမျ့မယျ။
THEY. ဆိုတဲ့ အမရေိကနျနှဈယောကျတှဲ R&B အဖှဲ့လေးကတော့ Pops ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ သူတို့ကို ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျခဲ့တဲ့ သူတို့ အဖတှေရေဲ့ မတ်ေတာနဲ့ ပြိုးထောငျမှုကို ဆိုထားပါတယျ။